သာလွန်ဇောင်းထက်| February 18, 2013 | Hits:20,239
25 | | မန္တလေးတွင် တရားမ၀င် နေထိုင်ကြသူ အများစုသည် တရုတ်အနွယ်ဝင်များဖြစ်သည်ဟု မန္တလေးမြို့ခံများက ဆိုသည် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ရာဇာ February 18, 2013 - 7:51 pm	အရေးယူမဲ့ အဖွဲ့ထဲ မှာ ဦးအောင်မင်း များပါသေးလား ? တော်ကြာ အိမ်ဝင်မစစ်ခင် အိမ်ဝက ဦးချပြီး မှဝင်စစ်ပါ ဖြစ်နေအုံးမယ်….